Xa udinga ukutya imifuno eluhlaza kunye neziqhamo
Ngoku ngokutya okuphilayo, okanye "phila" (eluhlaza) ukutya - isiseko esilula, esitsha kunye nesityebi kwizinto eziphathekayo ekhishini. Iingqungquthela zikhetha ukunandipha imveliso kwifom yazo yendalo, zizonwa ngobungqina bumnandi, umbala kunye novumba. Xa kuyimfuneko ukutya imifuno eluhlaza kunye neziqhamo kwaye luncedo kangakanani lohlobo lokutya?
Ngoko ubuyele ekudleni okuluhlaza?
Ngelinye ilanga, ekupheleni kweminyaka, umonakalo wengozi wanciphisa isiqwenga senyama okanye ambalwa okusanhlamvu emlilweni. Kwaye sele sinambitha imveliso eyadlula "ukuhlolwa komlilo", ndafika kwisigqibo sokuba kule fomu baninzi kakhulu! Ngaloo ndlela iphelile ixesha lokutya okuluhlaza, kunye nokupheka okuphucukileyo okuye kwaqhubeka namhlanje. Nangona kunjalo, bekunambitha ukutya okutya namhlanje, abantu abaninzi abanakucinga ukubuyela kwimithombo yokutya. Ingxabano yabo eyona nto kukuba ukutya okuluhlaza akutshintshi ukuveliswa kwezinto zangaphambili zeemveliso, zigcina zonke iivithamini kunye neemaminerali ezixabisekileyo zendalo. Indlela yokufakela imveliso yokutya okuluhlaza ayiyona nto yokutya, kodwa yindlela yokuphila. Kodwa ke, njengomthetho, "i-russula" elandelelanayo ayinakuxinzelela ubunzima obunzima. Ngaphezu koko, ukutshintshela ekudleni okuluhlaza, kwiinyanga ezi-3 zokuqala kulula ukulahlekelwa kwi-8-10 kg. Emva koko, badla abatyebileyo ngefiber efanelekileyo, kodwa kungekhona izipho eziphezulu zeekhalori zemifuno - imifuno, okusanhlamvu, iimbotyi, izantyambo kunye neziqhamo.
Iifayibutho ezitholakala kwimifuno kunye neziqhamo zibaluleke kakhulu kwisondlo sokutya, amandla ayo kukuba azalise ngokukhawuleza isisu kwaye anike umvakalelo wokutya, ngelixa kunamafutha amaninzi kwisityalo sokutya. Ukutya okuluhlaza kuvunyelwe, kodwa ungaphila phantse ifom ekhusileyo, kwaye, ngokwemvelo, akukho ushukela, utywala, ushokoledi, isonka kunye nokupheka - zonke ezi zinto ziye zafumana unyango obushushu. izilwanyana "zokutya okuluhlaza" kwizityalo ezintsha kunye nemifuno: kukwaziwa, ukuba kukho i-ushukela ngaphezulu kwibhobhu ngaphandle kwekhukhi! Imveliso yobisi engahlambulukanga, amakhowa aluhlaza kunye neesinkwa zihambelana ngokutya kwenkqubo yokutya. Ngokukhawuleza: Ndathengile ikhukhamba kunye netamatato (okanye ndayibhinqa ebhedeni lomyezo), ndayigeza, ndayidla, kwaye akufuneki ndiyipheke! Noko ke, iimeko zendlela yokugcoba i-stastomic current are not "housewives" abanomdla "abakhathele ukuma ngesitofu. Ukupheka kubo ngokuqhelekileyo kuyintando yokuzithandayo. Bapheka ngeengcamango, bachitha iiyure ekhitshini, bahlambulule, bahlambulula, baxuba izipho zendalo, bakhula ngenkuthalo imbewu kunye nobhontshisi, ukumelela izityalo kunye nokomisa izithelo. Kwakhona, abalandeli bokutya okuqingqiweyo banyanzelekile ukuba baqonde kakuhle iimveliso zokutya, kuba ukuba uceba ukutya isiqwenga sempahla eluhlaza okanye ukusela ingilazi yobisi obungasetshenziswanga, ukuzithemba ngokupheleleyo kwi-intanethi yabo eyona nto iyona nto iqinisekisa ukuba le nto ayiyi kuba isidlo sokugqibela ebomini bakho.
Ngokwehlobo "lwekhowudi yokutya eluhlaza", isitofu, i-oven okanye umlilo ovulekile ukupheka awukwazi ukusetyenziswa, kodwa akukafaneli ukugatya ukutshisa. Ngokomzekelo, iziqhamo, imifuno kunye namakhowe zinokumiswa elangeni. Emva kokuba unyango olunjalo, alugcini nje kuphela ukulondoloza, kodwa ukwandisa izakhiwo zabo ezixhamlayo (ukuxutywa kwamavithamini kwanda ngenxa yokukhuphuka kwamanzi), kunye nokufumana inkcazo ecacileyo. Le ndlela yokupheka imveliso ayinakunzima kakhulu kwaye ingabonakali njengoko kubonakala ngathi. Ngokomzekelo, itekisi eyomileyo yotamatisi yomsukisi yindabuko yendabuko isetyenziswe ngokubanzi nje ngendlela ekhethekileyo njengokutya okuluhlaza, kodwa nakwindawo eqhelekileyo kunye nento "ngokutya okuchasayo" ukutya kwaseMedithera. Nangona kunjalo, ukuthathwa ngokutywa kunye nokumiswa yizona ndlela zendalo, musa ukulibala malunga nokuba ubunjani bezinto eziphilayo emhlabeni kunye nomgangatho wamandla elanga zitshintshile (kwaye kungekhona ngcono) kwiqela elidlulileyo leminyaka yezigidi. Ukuqaphela oku, "ukutya okuluhlaza" okusebenzayo kubhenela ekuncedeni impucuko - bayatshintshwa ngaphandle kwesohlwayo ngabantu abadaka amanzi okanye i-dryer dryers. Ezi zilungelelwano zivumela ukulungiswa ngokupheleleyo kwezidlo ezahlukahlukeneyo, ngokutshintsha ngokugqithiseleyo ukunambitheka kwazo, ukuhambelana nokubonakala. Ngelo xesha, amaqondo okushisa asetshenziswanga ayedluli kwiindawo zokutya ezivakalayo ezivumelekileyo eziphantsi kwe-50 ° C! Kodwa, ngokuqinisekileyo, le ndlela yokupheka ayilula nje njengokucubungula ukutya kwisitofu okanye ngomlilo. Kuya kuba nengqiqo ukucinga ukuba ukulungiswa kwesidlo esinokufudumala okunjalo kuyinkqubo ende kakhulu. Ngoko kunjalo: ngamanye amaxesha umzobo wobugcisa ulungiselelwe iiyure eziliqela okanye nangomhla! Kodwa indlela enobumnene yokutshisa unyango lwabathandayo ukutya ngokutya okuluhlaza kubonwa njengesizathu esihle. Inyaniso yokuba ukuveliswa kwevithamini kunye nezamaminerali yemifuno eyomileyo kunye neziqhamo akucaci ukuba yinto engabonakaliyo kwizityalo ezitsha ziye zabonakaliswa ngokuphindaphindiweyo ngabaososayensi. Ngendlela, usebenzisa ukushisa okuphantsi, aba bantu abagulane abanokupheka kuphela ukupheka izinto eziluhlaza kwiisobho kunye neengqungquthela, kodwa bhakabhaka kunye neento ezibizwa ngokuba "ziqhekeza", izonka ezisebenzisekayo ezinokutya okusanhlamvu kunye nosawoti!
Ngoko, ubuyele kuphando loosayensi. Ukuthotyelwa, ukukhokela izondlo zehlabathi kubonise ukuba unyango olushushu lubulala ngokuthe ngqo zonke izinto ezixabisekileyo ezikutya. Ngaba ufuna ukuphazamisa imveliso emihle? Akukho nto ilula! Yongeza nje amanzi kulo kwaye upheke kakuhle. Ukususela kwi-30 ukuya kwi-90% ye-vitamin C, ebaluleke kakhulu ekugcineni ubuhle kunye nempilo, ihlala epeni, kunye nevithamini ze-B eziyimfuneko yokuveliswa kwamandla "ziphuphuma ngokupheleleyo". Ngaloo nto, zeziphi izinto eziyimfuneko eziguqulwa emva kokucwangciswa kweemveliso kwi-deepry fryer okanye kwi-pan fries, abafilosofi banesaba ukuthetha ngokuvakalayo. Ngoko ke, umzekelo, nayiphi iklabishi ingcono ukuyisebenzisa ngohlobo. Oku kuyiluncedo kakhulu: kwanele ukondla le mifuno eluhlaza 6-8 ngeenyanga - kwaye awujonganga nomhlaza wesibindi. Ukupheka kunye nokubethelela i-cruciferous ukukhulula iimpahla zabo ezixabisekileyo. Kukho ubungqina bokusetyenziswa kweminye imifuno eluhlaza - ukukhusela kakhulu umhlaza, ngakumbi umhlaza wesondlo sesisu. Emzimbeni we "ukutya okuluhlaza" kufumaneke izinga eliphezulu le-carotenoids - izinto eziqinisa isistim somzimba. Nangona enye i-immunostimulant - lycopene yemvelo - izithandwa zokudla "ziphila" ziyabikho. Kuninzi, umzekelo, kwiitamatisi, kodwa, alas, ifaniswe kuphela emva kokucubungula kwe-thermal yomphathi. Ngoko i-ketchup, ngokungaqhelekanga, inokubaluleke ngakumbi kunotamatato entsha.
Ukutya okumnandi, njengento yonke ebomini bethu, luncedo ekumodareyithweni. Musa ukuya kuyo yonke into enzulu! Thatha kule nkqubo yesondlo imigaqo ebalulekileyo kwaye "uzimisele" ukuba bakhonze impilo yabo.
Ekudleni kwabaxhasi benkqubo yokutya okuluhlaza kuninzi imifuno kunye neziqhamo, izibonelelo ezibonakalayo. I-Norm-5 ukuya kwi-7 yeemveliso zemihla ngemihla (khumbula ukuba ubukhulu bayo bulinganiselwe: ngamnye akufanele abe ngaphezu kwe-100-150 g. Ukusetyenziswa kakubi kwefayili yezityalo, ubeka umngcipheko "ukhulula" inkqubo yokutya, eya kuphendula iingxaki nge-pancreatic and osteoporosis). Imveliso yemifuno emininzi icebile kwi-fiber, eyinceda ukunciphisa umzimba kwaye ithuluzi elifanelekileyo lokukhusela elinceda ukunciphisa ingozi yomhlaza. Ukuba awuyikutyhila inyama ukutshatyalaliswa kwonyango ezifana nokucima okanye ukugcoba, ngoko kugcina amavithamini amaninzi. Kwaye ngokubaluleke kakhulu, akukho zinto ezongezelelweyo eziyingozi, ezinjenge-hydrogen sulphide, i-ammonia ne-mutagenic pyrolyzates, ezinokubangela ukuba utshintsho olubi kumzimba womntu kwinqanaba le-DNA! Kwiintlanzi zentlanzi, inkqubo yokulungiselela engabambezeli, i-polyunsaturated fatty acids (ngokukodwa i-omega-3) ihlala ingatshintshi kwaye ikhusela ngenene intliziyo kunye nemithambo yegazi ukusuka ekubunjweni kwe-thrombi, ukunciphisa i-viscosity yegazi kunye nenani leoli equlethwe kulo, kwaye imise ukuba i-arterium uxinzelelo.
Kulabo abakhetha ukutya kokutya kwemifuno, kuyimfuneko ukuzalisa ngokuthe ngcembe isitokethi samanye amaminerali "okuvela kwimfuyo". Ngoko, imithombo emihle yesinyithi i-almond, ubhontshisi, tofu. Ukuhlawula ukusilela kwe-calcium, kubandakanywa nokutya okuninzi iklabishi, i-soy, iikhiwane. Amafutha acatty ukususela kwi-linseed, ioli yeoli, ama-walnuts. Ubuninzi bokutya okuluhlaza, kwaye ngokukodwa ukusetyenziswa kakubi kwefiber, kunokubangela ukuphazamiseka kwendlela yokuxhamla isisu, kunye nabantu abaneengxaki ezingapheliyo zesifo se-gastroenterological - ukwanda kwezifo ezikhoyo, njengoko ukugaya kwayo kusoloko kumthwalo omkhulu kwizitho zokutya, ngakumbi iipascreas. Kukho iimveliso ezingabonakali kakuhle emva kokutshatyalaliswa kobushushu, kodwa zingabungozi ngaphandle kokudlula. Kuloluhlu: utamatisi, iitapile, amaqanda, inyama kunye nentlanzi. Ukungabikho kokhathazwa kwentsholongwane kunokukhokelela ekubeni akukho onke amabhaktheriya e-pathogenic kunye nezinto eziyingozi eziya kubhujiswa. Umngcipheko "wokubamba" i-salmonella, ibhaktiriya eyingozi i-Vibrio para-heamolyticus, i-E. coli okanye i-alkaloid al-solide ye-alkanide "ye-russula" inkulu. Ngoko akufanelekile ukusetyenziswa kokutya okuluhlaza kwoluhlu olunikeziwe ngasentla. Izondlo zicebisa: konke kuxhomekeke kukutya okubambelela kuyo, ukutya kwakho kufuneka kuzaliswe kwaye kuphele. Oku kusebenza kuzo zombini iimveliso, kunye neendlela zokulungiselela. Eyaziwayo ukususela ebuntwaneni, umgaqo "wegolide intetho" kwaye nantsi ilungile! Zingaphi iindlela zokulinda ezilula - kwaye unokuzonwabisa ngokutya ngokutya "okuphilayo"!
Imveliso kufuneka ibe ngokutsha ngokutsha!
Imifuno kunye neziqhamo ziye zasindisa izinto ezinobomi, zihlambe phantsi kwamanzi ahambayo. Imifino kunye ne-lettuce "hlambulula" kwisitya. Ukuba kuyimfuneko ukugawula imifuno okanye iziqhamo, bawafaka kwi-plastic grater. Khumbula ukuba xa iziqhamo zidibanisa nentsimbi, zonke iivithamini eziqulethwe kuzo zichithwa ngokukhawuleza. Izitya eziphekwe "eziqhekezayo", zitya ngokukhawuleza. Ekukhanyeni kwaye ngaphantsi kwefuthe le-oksijeni, iinzuzo ziyaqhuma, "ngelixa izidalwa ezinobungozi zikhula ngokukhawuleza, ngexesha lokutya asinasiphuzi esininzi siselo ukuze uphephe ukuqhaqhaza, hlaziya nganye iqela ubuncinane ubuncinane imizuzwana engaphezulu kwe-15 • Sebenzisa i-condiments: ioli yeoli, i-lemon juice , imifuno ecocekileyo, iziqholo, ii-marinades. Emva koko uhlaziya isitya sezonka, unikezela umzimba ngezondlo ezongezelelweyo, ukuququzelela ukufana nokutya kwePepper, i-sinamon, i-tarragon, i-coriander, ngaphezu koko, bayakwazi ukunciphisa i-microorganisms e-pathogenic equlethwe ukutya ekrwada.
Ukuchaneka, ukutya okunempilo yonke imihla
Indlela yokuba ngumncinci: sifunda ukuphepha izilingo
I-Ayurveda - iMicrosoft Medicine
Indlela yokulahlekelwa isisindo kunye neoli ye-castor?
Inyaniso yonke malunga ne-eggplants: izakhiwo ezincedo
Indlela yokukhetha amanzi amaminerali
Uhlobo lwegazi kunye nomlingiswa
Ulwabelana ngesondo - Uthando lwesiFrentshi
Indlela yokulahleka umzimba ngokukhawuleza ngaphandle kokulimaza kwimpilo
UJim Carrey noJenny McCarthy
Isobho sekhononi kunye ne-shrimps
Cottage ushizi casserole
Indlela yokunciphisa umzimba ngokukhawuleza ngaphandle kweepilisi kunye nempilo
Yintoni enokuyenza ngethuba lokuphumla lomntwana
Ukondla komnyaka wokuqala wobomi: ukukhwela
Izindlela ezingama-30 zokunqoba iingxaki zokulala
Ukuhlwaya kwaye kuncedo: I-TOP-3 iimveliso ezingaqhelekanga ekudleni kwabantwana
Iiphoso ezi-8, ezihlala ziqhutywa kwiiklasi zengqondo
Impilo yeFeng Shui: Iingcebiso kunye namaTalism
I-Gnocchi kunye ne-sauce yenyama
I-Adenoids emntwaneni: kwakhona